ညီနေမင်း: UltraSurf ဖြင့် ထိုးဖောက်ကျော်လွှားခြင်း
UltraSurf ဖြင့် ထိုးဖောက်ကျော်လွှားခြင်း
ဒါကတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ရွှေမြန်မာများ အတွက်ပါ . အထူးသဖြင့် ပြောနေကျအတိုင်း မြန်မာပြည်ကသူတွေ အတွက်ပေါ့ . ဟိုဖက်ပိတ်လိုက် ၊ ဒီဖက်ပိတ်လိုက်၊ ပိတ်ပြီးတော့ ဆို့လိုက်၊ ဆို့ပြီးတော့ ပိတ်လိုက် ဆိုတဲ့သီချင်း လိုမျိုးဖြစ်နေပြီ ၊ ပိတ်ပြီးတော့ ထပ်ဆို့တော့ ဘယ်အပေါက်က အသက်ရှုမတုန်း၊ ကဲဒါတွေ ထားလိုက်ပါတော့ အခုကျွန်တော်ရေးမှာက ကိုကြည့်သင့်တဲ့ဆိုက်လေးတွေကို ခက်ခက်ခဲခဲကြည့်စရာ မလိုအောင်လို့ ကျွန်တော် UltraSurf နဲ့ ကျော်လွှားနည်းကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ် . အဆင်ပြေနိုင်ကြပါစေ . တောင်းဆိုထားတာတော့ အတော်ကိုများပါပြီ . ရေးဖို့ ဒီဖက်ကို အလှည့်မရောက်တာလဲ ပါတယ် ..
(၁) http://www.ultrareach.com/download_en.htm ကို သွားပါ ..
(၂) Download release version UltraSurf 9.5(.exe) ဆိုတာလေးကို နှိပ်ပြီး နောက်ဆုံး update လုပ်ထားတဲ့ ultrasurf ကို Download ချလိုက်ပါ။
(၃) ဆိုက်ကိုဝင်မရသူများ အောက်မှာ Download လုပ်လိုက်ပါ .
(၄) Double click နှိပ်ပြီး Run လိုက်ပါ .
(၅) Home ၊ Retry ၊ Option ၊ Help ၊ Exit ရှိတဲ့အထဲက Option ကိုရွေးပေးလိုက်ပါ .
(၆) ပေါ်လာတဲ့အထဲက Proxy Setting ကိုထပ်ရွေးပါ .
(၇) အခုပေါ်လာတဲ့ proxy box ထဲမှာ Auto Detect Proxy , Manual Proxy Setting , Directly use proxy ဆိုပြီးတော့ ၃ ခုရှိပါတယ် . အဲဒီ့အထဲက Manual Proxy Setting ကိုရွေးလိုက်ပါ .
(၈) ပြီးတော့ အခုလက်ရှိ ကိုသုံးနေတဲ့ စက်ရဲ့ Proxy Host နှင့် Proxy Port ကိုဖြည့်ပေးပြီး ok ကို နှိပ်လိုက်ပါ .
(၉) ပြီးတာနှင့် Ultrasurf ကို 10 စက္ကန့်လောက် ခဏပိတ်လိုက်ပြီး . ပြန်ဖွင့်လိုက်ပါ .
(၁၀) ပြီးတာနဲ့ ဖွင့်ပြီးတော့ သုံးလို့ရသွားပါပြီ .
(11) Gtalk မရသူများ Gtalk ရဲ့ connetction setting မှာ Proxy = 127.0.0.1 , port = 9666 ဆိုပြီး ဖြည့်ပါ။ ဖြည့်ပြီးတာနဲ့ အသုံးပြုလို့ရသွားပါပြီ .. proxy နဲ့ port တွေကိုတော့ သိအောင်လုပ်ထားပါ . မြန်မာပြည်ကလူအချင်းချင်း မေးမြန်းလို့ရပါတယ် . ကဲ အဆင်ပြေနိုင်ပါစေဗျာ ..
တစ်ခုအကြံပေးချင်ပါတယ် . Ultrasurf ကို သုံးမယ်ဆိုတိုင်း အသစ်ကို Download ချချပြီးမှ သုံးပါ . သူတို့က အမြဲတမ်း Update လုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက် version အသစ်ကို သုံးရင် ပိုပြီးအဆင်ပြေနိုင်ပါတယ် . ဆိုက်က သေးသေးလေးပါ . မပင်ပန်းပါဘူး Download လုပ်ရတာ .
Posted by ညီနေမင်း at 9:50 PM
Labels: Proxy websites, ကျော်လွှားခြင်းနည်းလမ်းများ
sein October 4, 2009 at 11:40 AM
့်ကိုညီနဲ့ တွေ့ မှဘဲ ကျော်လွှားနိုင်တော့တယ် ကျေးဇူးဘဲဗျာ
ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းရှိ window7တင်ချင်သူများ သတိထ...
window7ကို ဘယ်လို activate လုပ်မလဲ ..
A+ pc hardware (မြန်မာလို)
Hiren's BootCD v10 and other versions
Portable များ စုစည်းမှု
Kaspersky version အားလုံးအတွက် keys များ
Freedom ကို မြန်မာလို ပြင်ဆင်မှု ပြုပြီး ကျော်ခွကြပ...
လာပါပြီဗျာ SUPERAntiSpyware Pro 4.2 with keygen a...
avira premium key ပါ
Download KIS New Keys
AVG Antivirus 8.5 Pro နှင့် 9
Download Quicktime Pro 7.6
System Mechanic Profession 9.0.4 Latest
Kaspersky keys တွေကို black list မှ whitelist သို့...
Microsoft .NET Framework (32 & 64 Bit Windows)
Download RegistryBooster 2010
iphone အား Unlock နှင့် jailbreak ခေါ် ထောင်ဖောက်ခြ...
Theatre of war -2patch
printer ink cartridges များအတွက် reset website လေး...
Winguard Pro 6.56 with serial number
crack ကို ဘယ်လို အသုံးပြုရလဲ .
Abdobe Acrobat 9
Advanced System Optimizer Version 3.0.55
Portable Your Uninstaller! 6.2.2009
MS 2003 portable (67.8 MB)
အောင်မယ်လေးဗျာ သူများကို Hack ချင် လို့တဲ့ .
ကဲ ning မှာ ဘယ်လို ဘန်းမလဲနှင့် admin ဘယ်လိုပေးမလဲ...
Mobile မှာ မြန်မာလို ပေါ်ဖို့ ဇော်ဂျီ keyboard လာပါ...
Portable BB FlashBack Pro v2.6.4.1293
Diskeeper 2009 Pro Premier 13.0 Build 835 Portable...
19 MB ပဲရှိတဲ့ Microsoft Office 2007 Blue Edition ...
PC ကို Screen saver နဲ့ ဘယ်လို Lock ချခဲ့မလဲ
Video + Editors Tools (AIO TOOLS)
1CLICK DVD COPY PRO 4.0.9.0 Portable
Nero9light
Ning ဆိုက်မှာ ပျိုးပျိုးပျက်ပျက်လေးတွေ ပေါ်ချင်လား
Ning မှာ movie ဘယ်လိုတင်သင့်လဲ
Windows7XP Mode RTM + Virtual PC 6.1.7600.16393 ...
Auto desk (Lynda.com)
My Screen Recorder Pro v2.48
Passport Photo v2.0.2
မကြည့်စေချင်တဲ့ ဆိုက်တွေကို ဘယ်လို ပိတ်ထားမလဲ .
win rar password remover and win zip password remo...
"KAV" v7 v8 and v9 "Keys": Updated on 1st October'...
Download the "KIS" v7 v8 and v9 "Keys": Updated on...
uper Screen Recorder
win rar မှာ password ပေးထားတဲ့ဖိုင်တွေကို ဘယ်လိုပြ...
ခဲရာခဲဆစ်ရှာထားသည့် password cracker tools များ
G I Joe Rise Of The Cobra (2009)
googletalk password recovery
အမှန်တကယ် အကူအညီလိုအပ်လျှင် ကူညီပေးပါမည် .